I-Sautéed Wild Asparagus, Amakhowe kanye ne-Garlic Encane | Ukupheka Kwekhishi
Loreto | | Okufakiwe Okushisayo, General, Amakhowe Ungadliwa, Side Dish Ungadliwa, Ungadliwa Kwemifino, Ukupheka Okulula
I-stir fry Imvamisa kuyindlela enhle yokujabulela ukuhlangana kwezithako eziningana. Enye yama-stir-fries engiyithanda kakhulu yilokho engifuna ukukuhlanganyela nawe namuhla. Hlanganisa izithako ezintathu nenyunyana icishe iphelele, isusiwe I-asparagus yasendle enamakhowe nogalikhi omncane.
Njengenjwayelo, sithenga isithako esiyinqaba futhi sihlela isikhathi.
Ama-clove ayi-8 egalikhi
Ithileyi eli-1 lamakhowe
Amakhowe ama-oyster ayi-1
Njengoba ubona ukuthi i- iresiphi enemibala futhi ibuye inikeze ukunambitheka okukhetheke ngempela, zihlangana ngokuphelele.
Sisike i- i-asparagus eqoshiwe, Okokuqala sisusa ingxenye engezansi, ize iqhume cishe yodwa, ukuze yazi ukuthi ngeke ibe nzima ngemuva kokuphekwa. Amakhowe, siwahlanza njalo. Kumakhowe Sisusa ingxenye engezansi yomgqomo bese siyisika ibe izingcezu, amakhowe oyster kufanele uwasike abe yimichilo. Igalikhi yethenda, siwasika phakathi bese sisusa izingxenye zeminwe engaba mibili.
Lapho nje sesinezithako ezisikiwe, sibeka ipani elinamafutha ukushisa bese sifaka zonke izithako ukuwasusa. Kunabantu abaqala babilise isilimo esinengono emnandi edliwayo yasendle bese bewahambisa nabo bonke abanye, ngikwenza konke ndawonye, ​​ngoba ngithanda ukunambitheka abakunikeza kanjena kangcono, ungakhohlwa ukufaka usawoti omncane nopelepele uma uthanda.
Lapho sekuzoqedwa, sigaya uhhafu kagalikhi, ukuze usinikeze ukunambitheka. Ungase uzibuze Uma inegalikhi yethenda, kungani ifaka ugalikhi? Ngoba ithenda uma iphekiwe ilahlekelwa ukunambitheka okuncane futhi i-clove ithuthukisa lelo phuzu likagalikhi engilithandayo. Siqeda ukuyihambisa ngegalikhi futhi izobe isilungele ukudliwa.
Lesi sikhathi sekufanele kuhambisane nesinye isibiliboco, Kepha uma singenakho okwanele, ngokunengqondo singakhuphula izithako noma sengeze ngaphezulu kwesinye noma esinye, size sizishintshe.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Abangane » Okufakiwe Okushisayo » I-Sautéed Wild Asparagus, Amakhowe kanye ne-Garlic Encane
Ungayeki ukungena kuwebhu, izitshalo zokupheka, umbono omuhle kakhulu.
Ngibonga iresiphi, ngikuthola kukuhle kakhulu futhi kumnandi. Kulula ukudla okunokuthula.